Video inay Blackberry- Sida loo Beddelaan Video inay Blackberry
> Resource > Transfer > Sida loo Beddelaan Video inay Blackberry Phone ee Mac / Windows
Iyada oo ay caanka ah ee telefoonka Blackberry, waxaa jira dad badan oo haysta telefoonada BlackBerry aniga iyo adiga oo kale. Qaabka noocan ah ee mobile waa soo jiidasho leh si ay u isticmaalaan nooc oo ka mid ah fashion dhab. Waa hagaag, sida qalabka kale ee suuqa, BlackBerry helo ay dhibic ku guuldareysta gaar ah: jidaynayey loo maqli karo ee video qaab qaar ka mid ah gaar ahaan sida MP4, AVI, 3GP iwm Oo qaab kale oo sidoo kale loo jecel yahay file, sida FLV kaas oo la online si weyn loo isticmaalaa sida qaab file bixinta, MOV oo si weyn loo isticmaalo Mac OS, Blackberry ayaa ku siin doono ogeysiis qashinka ah. Sidaas, waxa ku saabsan dhibaato la mid ah loo maqli karo video on BlackBerry? Ha welwelin. Maqaalkani waxa uu tagaa xal ugu fudud ee aad u: badalo video file in BlackBerry.
Way fududahay in la badalo video in Blackberry, laakiin waxaad u baahan tahay a video Converter xirfadeed. Oo halkan platina Converter Video for Windows iyo Video Converter u Mac loo xiraa u samayn shaqada ee Mac (Snow Leopard, Libaaxa ka mid ah) iyo in Windows. Labada isticmaalay way bixiyaan qaab kaamil ah inta lagu guda jiro diinta video ah: fiican si degdeg ah xawaaraha diinta iyo video tayada khasaaraha-yar xitaa edit function awood badan u hagaajinta clips video.
Halkan qaadataa video in ay diinta ka BlackBerry Windows tusaale ahaan. Haddii aad u doonayaa inaan ku sameeyo shaqada Mac, waxaad tidhaahdaan, diinta video ee Mac, waxaad tagi kartaa ka Guide User of Video Converter u Mac badan info.
Tallaabada 1. Import files si video ay u Converter BlackBerry
Free download, rakibi iyo abuurtaan Converter video on your PC ugu horeysay. Guji "Add Files" oo la furo files aad rabto in aad si loogu badalo in ay Backberry aad PC ama qalabka ku xiran.
Tallaabada 2. U samee qaab wax soo saarka
Riix qaab icon dhinaca midig ee interface ugu weyn oo ay doortaan Blackberry sida qaab wax soo saarka. Tani Blackberry video Converter badalo karaa qaabab video ugu caansan inay Blackberry video files iyo badalo Blackberry videos in qaabab kale. Presets Qaar ka mid ah u BlackBerry waxaa la siiyaa fududeeyo aad video inay diinta ka BlackBerry.
Tallaabada 3. Ku bilow video in ay diinta ka blackberry
Guji "Beddelaan", si Converter 3GP si toos ah ayaa dhameystiri doona video soo galeen diinta Blackberry aad u.
Wondershare Blackberry video Converter waxay na siisaa hawlaha tafatirka video, sidoo kale. Riix wax videos aad rabto in aad si loogu badalo, ku dhacay "Edit" button ka dibna aad clip karo, dalagga iyo dar watermarks.
1. Waxaad u qeexi karaan profile wax soo saarka adigoo riixaya "Settings" ikhtiyaar;
2. buugga saarka ayaa lagu hagaajin karo. Guji "Output Folder" liiska hoos-hoos iyo dhigay meesha aad rabto ee la gediyay videos badbaadi.
Transfer Xiriirada ka iPhone in LG Optimus